Jr. Accountant at 21st Century | MyJobs
/ Jr. Accountant
Accounting နှင့်ပတ်သက်သော Diploma နှင့်Certificate များရရှိထားသူဖြစ်ရမည်.
Accounting နှင့် ပတ်သက်၍ Monthly Report, များကို စနစ်တကျရေးဆွဲ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။.
လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိရမည်